Baịbụl Dịgidere n’Agbanyeghị na A Gbara Mbọ Ibibi Ya
NSOGBU E NWERE: Ọtụtụ ndị ọchịchị na ndị isi okpukpe achọghị ka ndị mmadụ na-eme ihe Baịbụl kwuru. Ha gbalịrị iji ikike ha nwere kwụsị ndị mmadụ inweta Baịbụl, ibipụta ya na ịsụgharị ya. Ka anyị lee ihe atụ abụọ:
N’ihe dị ka n’afọ 167 Tupu Oge Ndị Kraịst: E nwere otu eze Siria aha ya bụ Antiochus Epiphanes. O si n’ezinụlọ Seleucus. Ọ gbara mbọ ịmanye ndị Juu ka ha kpewe okpukpe ndị Grik. O nyere iwu ka e bibie Akwụkwọ Nsọ Hibru niile. Heinrich Graetz, onye na-akọ akụkọ ihe mere eme, kwuru na ndị na-ejere eze a ozi dọwara akwụkwọ mpịakọta Baịbụl niile ha hụrụ ma gbaa ha ọkụ, gbuokwa ndị niile ha hụrụ na-agụ Baịbụl.
N’ihe dị ka narị afọ asatọ gara aga: Ụfọdụ ndị isi okpukpe Katọlik were iwe na ndị nkịtị bidoro ịna-akụzi Baịbụl kama ịna-akụzi ihe ndị Katọlik kweere. Ha kwuru na onye nkịtị ọ bụla ha hụrụ jí akwụkwọ Baịbụl ọzọ na-abụghị akwụkwọ Abụ Ọma nke e dere n’asụsụ Latịn bụzi onye na-ekweghị ekwe. Otu kansụl chọọchị Katọlik gbara mbọ ka e mee ihe a ndị isi ha kwuru. Ha gwara ụmụ nwoke ndị chọọchị ha ka ha na-aga achọ ndị na-ekweghị ekwe. Ha ga-aga n’ụlọ ọ bụla e chere na Baịbụl dị, saa anya ná mmiri chọọ ma hà ga-ahụ Baịbụl. Ha ga-agbakwa ụlọ ọ bụla ha hụrụ Baịbụl ọkụ.
Á sị na ihe gaziiri ndị a chọrọ ka Baịbụl gharazie ịdị, anyị agaaraghị ama ihe dị n’ime ya.
Baịbụl Bekee William Tyndale sụgharịrị dịgidere n’agbanyeghị na ndị ọchịchị achọghị ka ọ dịrị, a gbakwara ọtụtụ Baịbụl ọkụ, mechaakwa gbuo Tyndale n’afọ 1536
OTÚ BAỊBỤL SI DỊGIDE: N’oge ahụ Eze Antiochus na-agba mbọ ka a kwụsị ịgụ Baịbụl n’Izrel, e nweela ọtụtụ ndị Juu bizi n’obodo ndị ọzọ. Otu nchọpụta e mere gosidịrị na ka ọ na-erule n’oge ndịozi Jizọs, e kee ndị Juu ụzọ iri, ihe karịrị ụzọ isii ebighịzi n’Izrel. N’ebe ndị ahụ ha bizi, ha dowere Akwụkwọ Nsọ n’ụlọ nzụkọ ha dị iche iche. Ọ bụkwa ya ka ụmụ ụmụ ha nakwa Ndị Kraịst mechara gụọ.—Ọrụ Ndịozi 15:21.
N’agbata afọ 476 na afọ 1453, ọtụtụ ndị jí Baịbụl kpọrọ ihe gbara mbọ sụgharịa ya, jirikwa aka depụtaghachi ha n’agbanyeghị na o nwere ike ịta isi ha. Mbọ a ha gbara mere ka Baịbụl dịrị n’ihe dị ka n’asụsụ iri atọ na atọ tupudị e mepụta ígwè pụrụ iche na-ebi akwụkwọ n’afọ 1450. Ka oge na-aga, ịsụgharị Baịbụl biiri ọkụ, ana-ebipụtakwa ọtụtụ Baịbụl.
URU Ọ BARA: N’agbanyeghị na ndị eze a na-anụ aha ha na ụfọdụ ndị isi okpukpe gbalịrị ka Baịbụl ghara ịdị, Baịbụl ka bụ akwụkwọ a kacha asụgharị ma na-ekesa n’ụwa. Ụfọdụ mba si na Baịbụl nweta iwu ndị ha tiri nakwa ihe ụfọdụ ha na-ekwu n’asụsụ ha. Baịbụl a gbanweekwala ndụ imirikitimi ụmụ mmadụ.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Baịbụl Dịgidere n’Agbanyeghị na A Gbara Mbọ Ibibi Ya